version 0.6.6 – နောက်ဆုံး! လုံခြုံရေးလွှတ်ပေးရန်
နိုဝင်ဘာလ 12, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 13 comments
Cross Site Scripting ရဲ့ -> XSS
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ယောရှုသည် Hansen နှင့် Scott Caveza ဖော်ထုတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုထက်နိမ့်ဗားရှင်းများနှင့် Internet Explorer browser ကိုသုံးစွဲသူဖြစ်ပေါ်လာအောင်အလားအလာရှိကြောင်းနှစ်ခု XSS များ၏အားနည်းချက် Debugging ကူညီပေးနေမှာသူတို့ရဲ့အကူအညီကို 8, သို့မဟုတ် XSS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကအတိအလင်းကိုချွတ်ခဲ့ကြသောအခါ. ကျနော်တို့ဒီဗားရှင်းကိုပဌနာပြုရန်စေ့ဆော်ကိုရှောင်ရှား 0.6.6.6 နှင့်ပုံမှန်အမည်ပေးခြင်းမူဝါဒများပြန်လည်စတင်. သူများသည်အားနည်းမှု Transposh သုံးပြီး WEBMASTERS သို့မဟုတ် hosters မ​​ှမဆိုစွန့်စားမှုရှိုးမ, ဒါပေမယ့် sneaky အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီကွန်ရက်မှ script စိတ်ချယုံကြည်စေခြင်းငှါ, အသုံးပြုသူများမှ XSS နည်းလမ်း.
ဒီ Release စနေပြီကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ရင်တော့နောက်ပိုင်းတွင်လွှတ်ပေးရန်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့နှစ်ဦးနဲ့အခြားအပြောင်းအလဲအစုအဝေးကို, ပထမဦးဆုံး parser ကိုမှသေးငယ်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ခြင်း, အချို့သောပို HTML တို့အတွက်အထောက်အပံ့ကို enable လုပ်ထားခြင်း “အနိုင်အထက်ပြုအဖွဲ့အစည်းများ” ကဲ့သို့ &rsquo; user ကို outsmart ဖို့ကြိုးစားနေဆော့ဗ်ဝဲကဖန်တီးသော, ကျွန်တော်၌သူ၏အကူအညီအပေါ် archon810 ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ဒီ bug ကိုအစီရင်ခံစာ.
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ Google က Sitemap ကို XML မီးစက်များအတွက်ကူညီပံ့ပိုးအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်, ထို patch ကို php5.3 များအတွက်သင့်လျော်သောအထောက်အပံ့ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်ဖယ်ရှားတစ်စာတစ်စောင်ရှိတယ်, နှင့်အခြားကောင်းမွန်သောသတင်း, လာမယ့်ဗားရှင်း4ဒီ plugin ၏ပြီးသားကို built in ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, ဒီဗားရှင်းလည်းအချို့သောအသုံးပြုသူများခဲ့ကြောင်း 50k url န့်အသတ်ကိုဖျက်အထောက်အကူပြု. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်လို အန်းနာ Brachhold ဒီစီမံကိန်းအပေါ်သူ၏အမှုကြီးပေါ်.
ဒါကြောင့်လူတိုင်းက, သွားနှင့်မြှင့်တင်! ဒီ post ကိုက်ညီမှပုံရိပ်တစ်ခုကိုရှာဖွေထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲမထိုက်မတန်ခဲ့လို့.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: google-XML-Sitemap, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, securityfix, wordpress မှာ plugin
version 0.4.0 – မင်္ဂလာသစ်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း
ဇန္နဝါရီလ 1, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 25 comments
ဒီဗားရှင်းသစ်လူကြိုက်အများဆုံး wordpress ကို plugins ကိုနှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းကပံ့ပိုး. ပထမဆုံး, google-XML-Sitemap Google နှင့် Google Webmaster tools တွေနဲ့တွဲသုံးဘို့ Sitemap ကိုဖန်တီးရန်တစ်လမ်းပံ့ပိုး, ပေါင်းစပ်ခြင်းထားသောစာမျက်နှာများတွင်များအတွက် Sitemap နောက်ထပ် urls အတွက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ URL ကိုများအတွက်ဖန်တီးပေး. ဒီပေါင်းစည်းမှုကမူရင်း plugin ကိုအပေါ်ဖျော်ဖြေဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ patch ကိုလိုအပ်ပါတယ်, ဘယ်လိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများတွင်ဖတ်, ဒါမှမဟုတ် patch file ကိုခံယူခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ဟာ google-XML-Sitemap ၏အနာဂတ်ဗားရှင်းကို default အားဖြင့်ဒီ patch ကိုထည့်သွင်းမည်ကိုမျှော်လင့်.
ဒုတိယပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူရှိ၏ wp-super-cache ကို အရာအဘို့အ wordpress ကို cache လုပ်ယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒီ plugin ကိုနှလုံး၏မေ့မြောမဖြစ်ပြီးလမ်းခရီးတွင်ပြဿနာများ၏တန်ချိန်လဲလှယ်အတွက်ကြံ့ခိုင်တဲ့ cache လုပ်ယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေး, installation လုပ်ခဲယဉ်းသည်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုပင်ခက်ခဲသည်. သို့သော်, ဒီပေါင်းစည်းမှုကဒီ plugin ကိုအသုံးပြုသူဘာသာပြန်ချက်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာ cached စာမျက်နှာကိုဖျက်ပစ်သောရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒီ Non-ဘာသာပြန်ထားသော content တွေကိုကြည့်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်မှနှင့်သုံးစွဲသူများထံမှဘာသာပြန်ချက်များကိုကာကွယ်တားဆီး (auto-ဘာသာပြန်ချက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ထပ်ကာထပ်ကာဘာသာပြန်ဆို).
သင်ပိုမို plugins ကိုရှိပါကသင်နှင့်အတူပေါင်းစည်းရေးချင်တယ်, နှင့်သင်မည်ကဲ့သို့အတွေးအခေါ်များရှိသည် (လို့တချို့ code တွေကို), တော့ဒီမှာမှတ်စုတစ်ခု drop. ထိုအဟုတ် – ကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာသစ်ကိုဆယ်စုနှစ်အတွင်း!
Update ကို 2010/1/3 – ဒါဟာ patch ကိုညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူဆိုတဲ့ error ရှိ၏ပေါ်လာပါလိမ့်, အသစ်အညွှန်ကြားချက်များကိုဤ site ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်းမွမ်းမံ (ကျေးဇူးတင်စကား myatus). အဆိုပါ patch ကိုကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဒီ link ကနေ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် : Sitemap-Core-322-ဖာပြင်သော
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: google-XML-Sitemap, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin, wp-super-cache ကို
အမှားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါသည်, အရာဖြစ်ကောင်း feed ကိုဆင်းသည်ကိုဆိုလိုသည်. နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ.